महामारीले निम्त्याएको डरलाग्दो खतरा : बालबालिकामा एन्जाइटी डिसअर्डर हुनसक्छ, यसरी जोगाऔँ — Moon Light Khabar
महामारीले निम्त्याएको डरलाग्दो खतरा : बालबालिकामा एन्जाइटी डिसअर्डर हुनसक्छ, यसरी जोगाऔँ
सन् २०१९ को डिसेम्बर महिनाको अन्तिम साताबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण रोकिएका वा स्थगन भएका सबै क्षेत्र डामाडोल हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सबै मानिसहरू आ–आफ्नो व्यवसायको चिन्ता गर्नैपर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन् ।
नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रमण हुन थालेको पनि डेढ वर्ष भइसकेको छ तर संक्रमणदर भने दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । जसले गर्दा कति मानिसहरूले आफूले गर्दै गरेको रोजगारी गुमाएका छन् भने कतिले भर्खर सुरु गरेको व्यवसाय डामाडोल भएको छ ।
कोरोना भाइरसको कारणले दिनभरिको मिहिनेतले बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने मानिसहरूको त कन्तबिजोक नै बनायो । त्यस्तै गरेर साना, ठूला व्यवसाय पनि अछुतो रहन सकेन, जसका कारण मानिसहरूको जनजीवन प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
सुरुसुरुमा त देशव्यापी रूपमा भएको लकडाउनमा मानिसहरू दुःखजिलो गरेर भए पनि घरमा बसे । जसातसो आफ्नो जीवन गुजारे । केही समयपछि अवस्था सामान्य होला भनेर सरकारका हरेक निर्देशन पालना गरेका मानिसहरू झण्डै २ वर्षको अस्थिर र डरमर्दो जोखिमको स्थितिबाट सामान्य अवस्थामा बाहिर आउन सकेका छैनन् ।
विभिन्न कामकाजमा व्यस्त जीवन बिताउँदै आइरहेका मानिसहरूका लागि लकडाउन परिवारसँग समय बिताउने मौकाजस्तै भएको थियो । तर यो समय यसरी लम्बियो कि धेरै मानिसहरूमा मानसिक तनाव समेत उत्पन्न हुन थालेको छ । पहिलाको जस्तो सामान्य जीवन बिताउन पाउने दिन कहिले आउला भनेर मानिस पर्खाइमा रहेका छन् ।
विस्तारै व्यवसायहरू खुल्दै गए पनि मानिसहरू काममा जाँदा डराई डराई निस्किरहेका छन् । कतै संक्रमित भइहालिने पो हो कि ? सबैको दिमागमा संशय रहिरहेको छ । जति समय बित्दै गयो त्यति खतरनाक भेरियन्टहरूले समात्दै गइरहेको अवस्था छ । संक्रमितको सख्या सँगसँगै दिनानुदिन मृत्यकको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ ।
यस्ता यावत कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू मानसिक रोगको सिकार भई आत्महत्याको बाटो रोजेको समेत पढ्न र सुन्न थालिएको छ ।
यस्तै गरेर यी सबै समस्याहरू झेल्दै गर्दा अविभावकहरू आफ्नो बालबालिकाको भविष्यलाई लिएर पनि चिन्तित हुँदै गइरहेका छन् । यतिका लामो समय भइसक्दा पनि विद्यालय नखुलेको कारण विद्यार्थीहरू घरभित्र नै थुनिएर बस्न बाध्य छन् । साथीभाइसँगको भेटघाट, शिक्षक शिक्षिकाहरूले स्कुलमा नै प्रयोगात्मक विधिबाट पढाएको उनीहरूले बिर्सिसकेका छन् ।
खालि एउटा अनलाइन कक्षाको भरमा बालबालिका अडिएको पनि डेढ वर्ष नाघिसकेको छ । तर बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि पढाइ, साथीभाइ, खेलकुद आवश्यक छ । बालबालिका सामान्य अवस्थामा देख्नेबित्तिकै उनीहरूमा केही पनि समस्या छैन भनेर सोच्नु हुँदैन । जुन कुराले उनीहरूलाई भित्रभित्रै चिन्तित बनाएको छ, त्यो कुराबारे अभिभावक बेखबर पनि हुन सक्छन् । त्यसैले हरेक अभिभावकले आफ्नो बालबालिका के गर्दै छन् भनेर राम्रोसँग निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
बच्चाहरूमा एन्जाइटी डिसअर्डर, समस्याहरू के–के हुन सक्छ ?
एन्जाइटी डिसअर्डका कारण बालबालिकामा धेरै परिवर्तन देख्न सकिन्छ । जसले बच्चाहरूमा सामान्यभन्दा अजिव अथवा डराउने, चिन्ता उब्जाउनेजस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछन् । यस्तो समस्या भएको बेला बालबालिकाहरूमा धेरै किसिमको परिवर्तनहरू देखाउने गर्दछन् । यो कुरा अभिभावकले ख्याल गर्नुपर्छ ।
उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन भएको अवस्थामा चासो लिनुपर्छ । पहिलो लक्षण भनेको उनीहरू सामान्य दिनहरूजस्तै मानिसहरूसँग कुरा गर्दैनन् । अचानक बच्चाहरूमा धेरै समस्या देखियो भने यो पनि एन्जाइटीको ठूलो समस्या हो ।
अहिलेको समयमा बच्चाहरू मात्र होइन सबै वर्गका लागि समस्याले भरिएको समय हो । तर बच्चाहरूको लागि झन् यो समय चिन्ताजनक र चुनौतीपूर्ण समय हो । बच्चाहरू पहिले बाहिर खेल्न जान्थे आफ्ना साथीभाई भेट्थे, स्कुल जान्थे, अरुसँग कुराकानी गर्थे, झगडा गर्थे, मेलमिलाप गर्थे, खुलेर हाँस्ने वा खुलेर रुने, साथीलाई सहयोग गर्ने, नयाँ कुरा थाहा पाउँथे, फकाउँथे ।
महामारी सँगसँगै यो सबै कुराहरू उनीहरूको वशमा रहेन । यस्ता कुराबाट उनीहरू वञ्चित हुन पुगे । यसबाट उनीहरू एक्लो महसुस गर्ने, एकोहारो हुने, भनेको नमान्नेजस्ता समस्याहरूबाट गुज्रिरहेका छन् । खाने, खेल्ने, पढ्ने, सुत्ने सबै समय परिवर्तन भएको कारण पनि बच्चाहरूमा यस्तो समस्या आएको विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।
बच्चाहरूमा आएको समस्या :
खाना खाने बानीमा परिवर्तन हुने
सुत्ने वा निदाउने बानीमा परिवर्तन हुने
एक अर्कामा घुलमिल नहुने समस्या देखिने
एक्लै र एउटै चिजमा घोरिइरहने
सिक्न सक्ने क्षमता घट्ने
यीबाहेक नयाँ कुरा जान्ने चासो नदेखाउनेलगायतका समस्या भएमा एन्जाइटी डिसअर्डर हुनसक्छ । हुन पनि उनीहरूले लामो समयदेखि साथीभाइसँग सिक्न पाएका छैनन् । विस्तारै नवीनता, रचनात्मक सोच्ने क्षमतामा कमी, गृहकार्यमा ढिलासुस्ती आदि भएमा यो एन्जाइटी डिसअर्डरका समस्याहरू हुनसक्नेतर्फ अभिभावक चनाखो रहनुपर्छ ।
यी संकेत देखिए भने एन्जाइटी भएको बुझ्नुस् :
अविभावकको जिम्मेवारी हो कि बच्चाहरू चिन्तित भएको कुरालाई राम्रोसँग चिन्नु । जब बच्चा कुनै कुरामा अडिग रहन्छन्, आफूभन्दा ठूलाको कुरा सुन्दैनन् । उनीहरूले केही लुकाइरहेजस्तो लागेमा, अनावश्यक डराउने, चिन्तित देखिने, आत्तिने, हैरानी भएजस्तो व्यवहार देखाएमा ।
बालबालिकाहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ?
यदि यस्ता लक्षण देखिएमा सम्बन्धित ठाँउमा लगेर जाँच गराउने बालबालिकाको अवस्थाबारे बताउने, उसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ छलफल गर्ने ।
चिकित्सकहरसँग छलफल गरिसकेपछि आमाबाबुले बच्चाको आवश्यकताअनुसार कदम उठाउने ।
बच्चाहरूलाई आमाबाबुको डरबाट बाहिर निकाल्न मदत गर्नुहोस् जसको लागि चिकित्सकहरूको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ ।
बच्चाको आत्मविश्वास बढाउनुहोस् ता कि उनीहरू डर र समस्याबाट बाहिर आउन सकून् ।
बच्चा र उनीहरूको भावना बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् ।